Baro 57 ka mid ah iskudhafka ugu wanaagsan ee Golden Retriever - Taranka
Baro 57 ka mid ah iskudhafka ugu wanaagsan ee Golden Retriever
Sannadba sanadka ka dambeeya, Golden Retrievers waxay ku kala sarreeyaan AKC shantiisa ey ee ugu caansan. Loogu jecel yahay soojiidashada iyo wada noolaanshahooda, Goldens waxay adkeeyeen booskooda sida cannoolada qoysaska caadiga ah.
Maaha wax lala yaabo in isku-darka Golden Retriever ay sii kordhayaan, sidoo kale. Laakiin dad badan oo aad kala dooran karto, way adag tahay in la ogaado halka laga bilaabayo.
Markaa aan yeelno sida Goldens ay sameyso, oo aan u quusno isla markiiba!
1. Isku darka Border Collie & Golden Retriever (AKA Golden Collie)
2. Isku darka Siberia Husky & Golden Retriever (AKA Goberian)
3. Isku-darka Cocker Spaniel & Golden Retriever (AKA Golden Cocker Retriever)
4. Isku darka Eyga ee loo yaqaan 'Bernese Mountain Dog & Golden Retriever' (AKA Golden Mountain Dog)
5. Isku-darka Yorkshire Terrier & Golden Retriever (AKA Goldenshire)
6. Isku-darka Basset Hound & Golden Retriever (AKA Golden Hound)
7. Isuduwaha 'Irish Setter & Golden Retriever mix' (AKA Golden Irish)
8. Isku darka Jack Russell Terrier & Golden Retriever (AKA Golden Jack Retriever)
9. Shepherd Jarmal & Isku-dheelitirka Dahabka (AKA Dahab Shepherd)
10. Isku darka Poodle & Golden Retriever (AKA Goldendoodle)
11. Isku darsiga Sheepdog Ingiriisigii hore iyo Dahabka Dahabka (AKA Dahab Dahab)
12. Isku darka Rottweiler & Golden Retriever (AKA Golden Rottie)
13. Isku darka Vizsla & Golden Retriever (AKA Golden Vizsla)
15. Isku-dhafka Beagle & Dahabka Dahabka (AKA Beago)
16. Isku-darka Biljimka Mal Illinois & Dahabka Dahabka (AKA Golden Malinois)
17. Isku-darka Feer & Dahabka Dahabka (AKA Golden Feeryahan)
18. Isku darka Chihuahua & Golden Retriever (AKA Golden Chi)
19. Isku dhafka Chow & Golden Retriever (AKA Golden Chow Retriever)
20. Isku darka Corgi & Golden Retriever (AKA Golden Corgi)
21. Isku darka Dachshund & Golden Retriever (AKA Golden Dox)
22. Isku darka Dalmatian & Dahabka Dahabka (AKA Goldmation)
23. Isku darka Doberman & Golden Retriever (AKA Golden Doberman)
24. Isku darka Dane Weyn & Dahabka Dahabka (AKA Great Golden Dane)
25. Isku darka Pyrenees & Dahabka Dahabka Dahabka ah (AKA Dahabka Pyrenees)
26. Isku darka Saint Bernard & Dahabka Dahabka (AKA Golden Saint)
27. Isku darka Samoyed & Golden Retriever (AKA Golden Sammy)
28. Isku darka Pitbull & Golden Retriever (AKA Goldenbull)
29. Cavalier King Charles Spaniel & Isku-darka Golden Retriever (AKA Golden Cavalier)
30. Isku-darka Afghan Hound & Golden Retriever (AKA Afghan Retriever)
31. Isku darka Alaskan Malamute & Dahabka Dahabka (AKA Alaskan Goldenmute)
32. Isku darka Bullmastiff & Dahabka Dahabka (AKA Golden Bullmastiff)
33. Isugeynta tilmaamaha Ingiriisiga & Dahabka Dahabka (AKA American Gointer)
34. Isku-darka Akita & Dahabka Dahabka ah (AKA Dahabka Akita ee Hawl-gabe)
35. Isku-darka Weimaraner & Dahabka Dahabka (AKA Goldmaraner)
36. Lhasa Apso & Isku-dhafka Dahabiga (AKA Goldenapso Retriever)
38. Isku qas Shar Pei & Dahab dahab ah (AKA Golden Pei)
39. Shetland Sheepdog & Isku-darka Dahabka Dahabka (AKA Golden Sheltie)
40. Isku-darka Newfoundland & Golden Retriever (AKA Golden Newfie)
41. Iskotishka Terrier & Dahabka Dhaxdhaca Dahabka (AKA Scolden Terrier)
42. Isku darka Springer Spaniel & Golden Retriever (AKA Spangold Retriever)
43. Isku-darka Ingiriisiga Mastiff & Dahabka Dahabka (AKA English Goldstiff)
44. Isku-darka Ingiriisiga Bulldog & Golden Retriever (AKA Golden English Bulldog)
45. Iskudhafka Bulldog ee Mareykanka & Dahabka Dahabka (AKA Golden American Bulldog)
47. Catahoula Leopard Dog & Dahabi ah Golden Retriever (AKA Golden Catahoula)
48. Shih Tzu & Isku-darka 'Retriever mix' (AKA Golden Shih Tzu)
49. Isku-darka Buluuga Heeler & Dahabka Dahabka ah (AKA Golden Heeler)
50. Isku-darka Pug & Dahabka Hawl-gabka (AKA Dahabka Pug)
51. Poodle, Cocker Spaniel, & Isku-dhafka Dahabka Dahabka ah (AKA Mini Golden Retriever)
52. Isku-darka Greyhound & Golden Retriever (AKA Golden Greyhound)
53. Shiba Inu & Isku-darka Dahabiga (AKA Golden Shiba)
54. Isku darka Maltese & Dahabka Dahabka (AKA Dahabka Malta)
55. Iskuduwaha Arudaha Australiya & Dahabka Dahabka (AKA Golden Australian Shepherd)
57. Isku darka Schnauzer & Golden Retriever (AKA Golden Schnauzer)
Waa kuwee iskudhafka Dhaxdhaca Dahabka ah ee aad guriga keeni doonto
La kulan Golden Retriever gacaliye
Gundog by abtirsiin, Soo Celinta Dahabiga ah waxay bilaabeen inay caan ku noqdaan dabayaaqadii 19aad iyo horaantii qarniyadii 20aad. Goldens waxay si dhakhso leh ugu soo jiiteen dareenkooda docile haddana ruux dadaal badan , iyo inta kale waa taariikh.
Si habboon loogu magacaabay, Hawlgabka Dahabka ah waxaa lagu kala soocaa jaakadiisa jilicsan. Timahooda dhaadheer, cufan waxay ku yimaadaan midabbo hodan ah oo dahab leh iyo dahab, taas oo ka dhigaysa in tarankaani si fudud loo garan karo.
La kulan eyga Cunsuriga Dahabka ah
Markay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah u leh u yihiin
Ragga qaangaarka ah guud ahaan istaaga 23-24 inji (58-61 cm) dhererkiisuna wuxuu gaaraa 65-75 rodol (29-34 kg). Dumar dheddig ah ku cabir 21.5-22.5 inji (55-57 cm) marka la engegayo inta badanna culeyskiisu waa 55-65 rodol (25-29 kg).
Marka la eego dhererkooda iyo xiisaha noloshooda, Goldens waxay u baahan yihiin ugu yaraan saacad jimicsi maalin walba. Si looga sii shidaal qaato, way u baahan doonaan 2-3 koob oo ah cunno qalalan oo borotiin ah, oo loo qaybiyay laba cunto.
Ha ku liicin qurxinta, sidoo kale! Taasi quruxda badan ee loo yaqaan 'Retriever' mane wuxuu u baahan yahay cadayasho maalin kasta si looga hortago dermooyinka iyo dhaldhalaalka.
Nasiib wanaagse, ardaydan la jecel yahay waxay u muuqdaan inay nool yihiin toban sano ama ka badan, iyagoo ku faanaya celcelis ahaan cimrigooda 10-12 sano . Noocyada kala duwan ee kansarku waxay ku badan yihiin Dahabka Dahabka, si kastaba ha noqotee. Xaaladaha wadajirka ah (sida sinta dysplasia ) waa walaac, sidoo kale.
Marka laga hadlayo iskudhafka dahabiga ah ee 'Golden Retriever', waxay umuuqdaan inay sii kordhayaan. Laakiin maxay tahay waxa ku saabsan noocyadan naqshadeeye ee leh eeyaha jecel meel kasta oo ay ku qaylinayaan caruurtooda isku dhafan ee Dahabka ah?
Maxay Dareeraha Dahabka isugu qastaa dhammaan ciilku?
Noocyada 'Crossbreeds' ayaa dalbanaya sababo dhowr ah. Kuwa bilowga ah, waxay noqon karaan u yar tahay in laga dhaxlo xaaladaha caafimaad caan ku ah eyda saafi ah.
Intaa waxaa sii dheer, iskudhaf isku dhafan ayaa u oggolaanaya a sifooyin shaqsiyadeed oo badan intaad ku arki lahayd saafi daahir.
Isku darka Golden Retriever waxay u muuqdaan kuwo saaxiibtinimo badan oo tababbar badan marka loo eego dhiggooda saafiga ah. Qaado nooc difaac difaac ah, tusaale ahaan. Ka gudubka iyaga oo leh 'Retriever Golden' badiyaa waxay keentaa saxaro bukaan socod iyo feejignaan labadaba leh.
Ama waxaa laga yaabaa inaad ku qanacsan tahay awoodda dabagalka eeyga eeyaha, laakiin waad sameyn kartaa iyada oo aan la helin madax-adaygooda astaanta. Isku-dhafka Dahab-goobeed ee Dahabka ah waxay u badan tahay inuu si wanaagsan uga jawaabo tababarka iyaga oo aan wax u dhimin dareenkooda ugaarsade-raadiyaha.
Dabeecadaada iyo muuqaalka saxda ah ee isku-dhafan ee dahabiga ah waxay ku xirnaan doontaa waalidkood kale.
Qaar ka mid ah isku dhafka 'Golden Retriever' aad ayey u weyn yihiin, waxaa lagu qaldi karaa fardo yar yar. Kuwa kale waxay si fudud ugu laaban karaan dhabtaada iyagoo aan dhibaato lahayn.
Badankood waxay leeyihiin dhogor dhexdhexaad ah ama dheer , sidaa darteed waa ammaan in la yiraahdo si kasta oo aad u doorato iskudhafka, hagaajinta ayaa noqon doonta qaab nololeed. Qorshee a ugu yaraan 3 jeer usbuucii , iyo kor u qaad inta jeer haddii eeygaagu leeyahay jaakad dheer.
Waa inaan sidoo kale ogaano in kudhowaad kasta oo isku dhafan Dahabiga Dahabku daadsho ilaa heer. Waan ka xumahay, kuwa xasaasiyadda qaba!
Jimicsiga joogtada ahi waa waajib loogu talagalay noocyadan isweydaarsiga ah. Xitaa haddii mid ka mid ah waalidkaaga cunugga ah uu caajis ku yahay xudunta, dhinacooda 'Golden Retriever' waxay kordhisaa fursadaha ah inaad kubad afar-lugood leh gacantaada ku haysato.
Waxay kuxirantahay heerka tamarta iyo cabirka isku darka 'Retriever Golden', waxay ubaahan karaan cunno kabadan ama kayar. Kuwa yaryar ee Dahabiga ah ayaa laga yaabaa inay u baahdaan 2-3 koob cuntada maalin kasta, halka iskudhafka weyn ee Dahabku u baahan yahay inuu u dhowaado 5 ama 6 koob maalintii.
Waxyaabo badan oo kala duwan, waxaad ku qasban tahay inaad ka hesho ardaygaaga ku habboon liiskayaga isku-dhafan ee Golden Retriever. Sii wad akhriska si aad waxbadan uga barato mid kasta!
La kulan xadka isku xidhka Collie & Golden Retriever
Dhaxalka waalidkood sifooyinka ugu fiican, a Isku-darka 'Golden Retriever Border Collie mix' waa firfircooni iyo maskax badan. Tani shaqeynta iyo xoolo dhaqashada waxay ku habboon tahay guryaha isboortiga!
Marka la eego wadista iyo himilada Golden Collie, ku noolaanshaha qaab nololeed firfircoon waa mid aan gorgortan geli karin. Diyaar u noqo ballanqaad dhab ah – iyo abaalmarin culus –taas isku dhafan oo xoog badan !
Nadiif ah Xayawaanka ayaa ah majaajilistaha fasalka iyo dhib wadayaasha fasalka oo loo rogay mid. Sidaas darteed, waad filan kartaa Goberian inay ahaato ugu yaraan hal xumaan. Maalin kasta waa layaab tan murgacasho nooc isku dhafan!
La kulan iskudhafka Siberia Husky & Golden Retriever
Hidda-wadayaasha Goberian ee u hoggaansamida dahabiga ah 'Golden Retriever genes' waxay yareynayaan hijinkyada 'Husky' xoogaa yar, laakiin tababar joogto ah iyo firfircooni ayaa lagama maarmaan u ah in laga ilaaliyo isweydaarsigan inuu socdo amok!
La kulan Pippin, isku darka 'Cocker Spaniel & Golden Retriever mix' - Isha sawirka
Guri buuxa? Dhib malahan. Milkiilaha keli ah? Sidoo kale ganaax. The Soo Celinta Khaanada Dahabka ah r waa qashin isku duuban oo ku farxi doona meel kasta.
Soo Celinta Dahabiga Yaryar , sida iyagana loo yaqaan, jeclahay wehel . Runtii iyagu ma ahan kuwo la xuso halka ay ka timaado, sidoo kale. Kaliya isha ku hay carruurta yar yar markay la ciyaarayaan qashin-qubka.
Dahabka 'Golden Cocker Retrievers' waa kuwo naxariis leh waxayna u baahan yihiin in si taxaddar leh loola macaamilo.
Ey Buurta Dahabka ah waa asal ahaan kubadaha waaweyn ee qalafsan. Dadka waaweyni wey cabbiri karaan ilaa 28 inji (71 cm) culeysna ilaa 115 rodol (52 kg)!
La kulan Arlo, Bernese Mountain Dog & Isku-darka Dahabka Dahabka ah - Isha sawirka
Moodhadhkooda adag waxay ku daboolan yihiin jaakad laba jibbaaran oo isku dhafan miridhku, madow, ama caddaan .
Miyaynu sheegnay in kubbadahaas qalafsan yihiin aad u firfircoon ? Horay u soco oo boodhka ka dhig kabahaaga socodka, oo xir kabahaaga ordaya.
Waxaad u baahan doontaa iyaga si ay ula socdaan nuucaan ruuxi ah! Marka la fiiriyo cabirkooda, waxaa fiican in caruurtani ay ku nool yihiin guri boos badan leh.
Dhismaha weyn ee loo yaqaan 'Golden Mountain Dog' ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in dysplasia sinta iyo arrimaha kale ee wadajirka ah ay noqon karto walaac. Eeyaha Dahabka ah ee Dahabka ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inay khatar weyn ugu jiraan Cudurka von Willebrand , atrophy retinal (PRA), iyo kansar.
The Goldenshire waa iswaafajin, muddo dheer daboolan yahay. Deg deg ah oo qunyar socod ah, Dahabka Yorkies wuxuu u rogi karaa waxqabad kasta ciyaar.
Xaqiiqdii, eeyahaani waxay u baahan yihiin meel u dhow 90 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta . Tamartoodu waa mid aan dhammaad lahayn! Ha na rumaysan? Daawo tan qaaliga ah ee Yorkie Retriever rabblerouse oo leh aadanaha!
Ciyaar ahaan sida ay yihiin, guri aan lahayn carruur yar ayaa ku habboon Goldenshire. Noocan isweydaarsiga ah guud ahaan wuxuu door bidaa dadka waaweyn oo had iyo jeer si fiican uma qaato carruurta yaryar.
Intaas waxaa sii dheer, Goldenshires waa xayawaanno yaryar! Waxay u baahan yihiin in si taxaddar leh wax looga qabto.
Si buuxda u koray, Dahabkaaga Yorkie ayaa istaagi doona 10-15 inji (25-38 cm) dherer iyo miisaan 20-30 rodol (9-14 kg). In kasta oo cabbirkoodu si weyn u kala duwanaan karo, ka feker doggoskan meel u dhexeysa yar yar Yorkshire Terrier iyo Golden Retriever adag.
La kulan Basset Hound & Golden Retriever mix
Waxad dareemeysaa xoogaa inaad kufaaneyso shuruudaha jimicsiga ee aad aragtay illaa iyo hadda? U ogolow Hound Dahab ah waxaan kuu xaqiijinayaa in isku darka dahabiga ahi ay noqon karaan kuwo caajis dhab ah runtii.
Basset Retrievers ayaa inbadan diyaar u ah inay kugula soo lugeeyaan socod ama duke ayagoo kujiraan dagaalka--o-dagaalka… laakiin sariirta oo aad ku seexato waa ciyaar xiiso badan, sidoo kale.
Marka lagu daro baahi jimicsi dhexdhexaad ah, Hounds Dahab ah uma baahna is qurxin badan sida isku dhafka kale ee Dahabka ah. Basset Hounds waxay leeyihiin dhogor ka gaaban Goldens. Haddii saxaabadaadu dhaxasho jaakad la mid ah, uma baahna in la cadayo had iyo jeer.
Lackadaisical inkasta oo ay yihiin, qiyaastan dhexdhexaadka ah ayaa soo jiidaneysa dareenka. Waxay jecel yihiin inay ciyaaraan oo waqti la qaataan xirmadooda ..
Celcelis ahaan, miisaanka Dahabka Da 'weyn ayaa miisaamaya 40-60 rodol (18-27 kg) oo aan istaagin wax ka badan 14 inji (36 cm) dheer Dhisidooda oo ay weheliso saaxiibtinimadooda xad-dhaafka ah ayaa ka dhigaysa iyaga a ku habboon qoysaska !
La kulan isuduwaha 'Irish Setter & Golden Retriever'
The Irish Dahab ah waa mid si xamaasad leh u dhaqaaqa, gaar ahaan tixgelinta cabirkiisa. Sida dadka waaweyn, canines kuwanu way taagan yihiin 22-26 inji (56-66 cm) dherer ah oo miisaankiisu yahay 6 0-75 rodol (27-34 kg). Weli, iyaga ayaa caan ku ah nimco iyo isboorti .
Laakiin waxa runtii soo jiidashada leh ayaa ah dhogorta dahabka leh ee dahabka ah ee loo yaqaan 'Irish Irish'. Midab kasta eey midabkiisu wuu ka duwanaan doonaa, laakiin cunuggan waxaa loo damaanad qaaday inuu yaabiyo!
Ka imanaya laba nooc oo waalid caqli badan leh, Dahabka Dahabiga ahi wuxuu u baahan yahay kicinta jirka iyo maskaxda labadaba si uu ugu farxo. Waxay jecel yihiin biyaha, markaa ha ka baqin inaad jadwalka u beddesho oo aad dabbaasha u qaadatid!
Sida haddii aysan taasi ku filneyn, Irishka Dahabka ah ayaa caafimaad ahaan aad u caafimaad qaba si loo kabo. Waxay halis ugu jiraan hip dysplasia iyo ectropion, laakiin eeyahaani waxaa lagu yaqaanay inay noolaadaan ilaa iyo inta 15 sano!
Dahabka Jack Jack si fudud ayaa loogu qaldi karaa xayawaannada cufan. Madow iyo xayawaan yaryar, eegyadaan quruxda badan ayaa had iyo jeer umuuqan doona sida eey yaryar, da 'kasta oo ay jiraan. Ilaa iyo inta astaamaha saxda ah ee 'Golden Jack', si fiican, kuwani gebi ahaanba lama saadaalin karo.
La kulan cunugga Jack Russell Terrier & Golden Retriever
Waxaad filan kartaa saqaf dhexdhexaad ah, laakiin saami ahaan iyo midabbada jaakadoodu way kala duwanaan doonaan. Waad ku khamaari kartaa shakhsiyad aan joojinayn, in kastoo!
Jack Russell Terriers had iyo jeer way socdaan, oo Jack Jack-kaaga ayaa loogu talagalay inuu helo ugu yaraan qaar ka mid ah moxie-kaas.
Dahabiyeyaasha 'Jack Jack Retrievers' waa inay ahaadaan kuwo yara caafimaad qaba, laakiin fiiro gaar ah u leh calaamadaha arrimaha wadajirka ah ama xaaladaha indhaha . Ka iibso Jack Jack-gaaga mid ka mid ah nafaqeeyayaasha sumcadda leh, la soco booqashooyinka dhakhtarka xoolaha, iyo cunuggaan cunugga ah waa inuu ku ag joogaa ugu yaraan 10 sano!
Uma baahnin inaan taa kuu sheegno Adhijirka Jarmalka iyo Golden Retrievers waa ciyaar lagu sameeyay jannada eyga. Natiijada labadan geed? Daacadda, kalgacalka Adhijirka Dahabka ah .
La kulan isku darka 'Shepherd German & Golden Retriever'
Adhijirka Dahabka ah jecel mashquul , oo ay ujeedadoodu tahay inay ka farxiyaan. Tababbarka noocyadan xariifka ah ee xariifka ah wuxuu noqon doonaa cunno!
Marka la eego caqligooda maskaxeed, Adhijirkaaga Dahabka ah ayaa ku sii deyi doona addeecitaan aasaasi ah.
U oggolow shaqadan isweydaarsiga ah ee ku lug leh dhaqdhaqaaqa ama tababarka sanka si aad uga dhigto kuwa fiiqan!
La kulan iskudhafka Poodle & Golden Retriever
Eeyaha jecel oo leh xasaasiyad, kani waa daqiiqaddaada! The Goldendoodle waa mid ka mid ah iskudhafka kaliya ee Dahabka leh suurtogalnimada jaakad hypoallergenic ah .
Mahadsanidiin Poodle’s hiddo-wadaha hooseeya ee daadanaya, isweydaarsigan guud ahaan wuxuu si aad ah uga yaryahay noocyada kale ee ku jira liiskayaga.
La taliya, in kastoo, 'daadinta hoose' iyo 'hypoallergenic' aysan ahayn wax isku mid ah. Weli waad arki kartaa dhogor dabacsan oo ka socota bakooraddan isku dhafan leh waqti ka waqti!
La kulan Lucy, iskudarsigii hore ee 'Sheepdog' iyo 'Golden Retriever mix' Isha sawirka
Idoho Dahab ah yihiin 80 rodol (36 kg) oo dhogor dhogor ah, oo wejiyadooduna ay ka samaysan yihiin hareerahooda canine. Ku maal gasho buraashka eeyga wanaagsan (ama hagaajiye wanaagsan) ee isweydaarsigan.
Jaakadaas macmalka ah waxay u baahan tahay TLC badan si ay u sii ekaato tan ugu fiican!
Way adkaan kartaa in la arko saameynta 'Golden Retriever', iyadoo la tixgelinayo in Sheepdogs Dahab ah ay badanaa noqon karaan hooska bunni ama madow .
Waxaad arki doontaa Dahabka shaqsiyad saaxiibtinimo iftiimi dhex, si kastaba ha ahaatee.
Roobleyda caan ku yihiin sifooyinkooda difaaca, samaynta ah Dahab dahab ah isku dhafka difaaca guriga iyo cayayaanka koolkoolinta.
La kulan Scottie, isku dhafka 'Rottweiler & Golden Retriever' - Isha sawirka
The Goldenweiler si fudud kor 100 rodol (45 kg) markii si buuxda loo koray, iyaga oo ka dhigaya mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee ku jira liiskayaga. Wiilashan waaweyni waa hubaal u baahan deyr waasac ah lugahaas dheer!
La kulan Mango, isku dhafka Vizsla & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Dahabka Vizslas waa dhexdhexaad oo leh astaamo soo jiidasho leh. Marar dhif ah ka weyn 60 rodol (27 kg), Dahabka Vizslas wuxuu leeyahay dhogor khafiif ah, gudaha naxaas ama codad dahab ah .
Waa indhaha dahabiga ah ee Vizsla, si kastaba ha noqotee, iyaga ayaa ka soocay. Nadiif ah Vizslas badanaa leeyihiin indhaha buluuga ama cawlan ee tartiib-tartiib u madoobaada markay bislaadaan. Eygaaga Dahabka ah ee Vizsla ayaa laga yaabaa inuu dhaxlo isla dabeecaddaas!
Markuu cunuggaagu korayo, filo heerkooda tamar inuu koro, sidoo kale. Vizslas way socon kartaa sida ugu dhakhsaha badan 40 mph , sidaa darteed waxay umuuqan kartaa in dahabigaaga Vizsla uu leeyahay gantaallo cagaha.
Jebinta xayndaabka dhawaaqa maahan wax walba oo ay ku wanaagsan yihiin, in kastoo. Ugaadhsadayaashii ugaarsiga , Golden Vizslas waa isku-darka saxda ah ee isku-kalsoonaanta iyo tababbarka. Waxay ku fiicnaan doonaan tababar joogto ah iyo fursado soo noqnoqda oo ay ku carfiyeen dareenkooda ugaarsiga dabiiciga ah.
Khalad ma khaldami kartid markaad isku darto laba nooc oo aan waqti lahayn sida Labradors iyo Goldens.
La kulan Labrador Retriever & Dahabka Hawlgabka Dahabiga ah
Iyada oo leh baashaal-jecel, dabeecad-socod fudud , Dahablayaal waa la damaanad qaadayaa inay kufiican yihiin dhammaan milkiilayaasha eyga.
La kulan Bella, isku-darka 'Beagle & Golden Retriever mix' Isha sawirka
Baagag Dahab ah u muuqdaan kuwo faraxsan oo tababar fudud. Laakiin waxay kuxirantahay nooca waalid ee Beago-gaagu qaato kadib, waxay yeelan karaan taxaddar gaaban - iyo xitaa rabitaan xoog leh oo ah inay raacaan caraf meel kasta oo ay u horseedi karto.
Noocani isweydaarsiga hore wuxuu u egyahay inuu kudhaco inta udhaxeysa 30-60 rodol (14-27 kg), sidaa darteed ma noqon doonaan wax aad u badan oo la maareeyo. Xitaa way sameyn doonaan si fiican ugu shaqee guryaha! Kaliya iska hubi inaad siiso Beago jimicsi badan.
La kulan Pam, Iskudhafka Iskuduwaha Malbioia & Dahabka - Isha sawirka
Qof weyn Dahabka Malinois miisaan karo ilaa 60 rodol (27 kg) oo sida caadiga ah leh madow, cagaar, iyo dahab dhogorta. Dahabka Malinois ayaa runtii u muuqda mid cajiib ah!
Ay Reer Biljim Belgian waalidku wuxuu caan ku yahay garaadkiisa, iyo dahabiga dahabka ah ma aha mid ka duwan. Noocani waa mid caqli badan, waxay u qaadan karaan inay iyagu kaa caqli badan yihiin!
Dahabka Malinois ugu fiican ku samee guryaha firfircoon , gaar ahaan haddii ay shaqo hayaan. Ku mashquul iyaga, oo waxay samayn doonaan xayawaan qoys oo weyn!
La kulan Sandy, Feeryahanka & Dahabka isku dhafka ah - Isha sawirka
Feeryahannada Dahabka ah waa saqafyo culus oo kori kara 22-25 inji (56-64 cm) dherer iyo miisaan 60-75 rodol . (27-34 kg). Marka la fiiriyo cabirkooda iyo heerkooda tamarta, waxay u baahan doonaan meel bannaan si ay uga soo baxaan nuujiyadooda!
Noocani waa mid ka fog hypoallergenic. Koodhadhkoodu wuxuu u dhexeeyaa meel kasta oo ka gaaban ama dheer iyo daadsan sanadka oo dhan.
Feeryahannada Dahabka ah sidoo kale xoogaa wey ku adkaan kartaa in la tababaro haddii ay Feedhyahan dhinac ayaa la wareega. Haddii aad khibrad u leedahay ilmo madax adag oo ciyaareysa, Feeryahanka Dahabka ah ayaa adiga kuu noqon kara!
La kulan Liaa, Chi Chi-da - Isha sawirka
Macaan iyo xoq Isku-darka Dahabka Chihuahua waa hubaal inuu cagahaaga ku hayn doono. Diyaar u noqo jacayl badan iyo suugaan badan!
Dahabka 'Golden Chis' wuxuu inta badan u ekaadaa kaydka dukaanka Chihuahua , laakiin guud ahaan aad bay u deggan yihiin.
Waxay u egtahay isku darka 'Golden Retriever mix'? Waxay ku dhowdahay inay dhawaqdo xitaa si ka fiican. Dahabka dahabka ah ayaa celcelis ahaan nool 14-15 sano , sidaa darteed waxaad sugi kartaa sanado badan oo farxad leh iskudhafkan.
La kulan iskudhafka 'Chow Chow & Golden Retriever'
Xulashada Dahabka ah waa muujinta qabow, deggan, oo la soo ururiyay. Noocan digaagga ee 'lowkey crossbreed' waa wehel wehel u ah subaxnimada Sabtida caajiska ah.
Boodhadhkan ayaa culeyskoodu noqon karaa meel kasta oo ay ka yimaadaan 50-75 rodol (23-34 kg), markaa waxaad u baahan kartaa inaad maal gashato sariir ka weyn. Hawl-qabadkaaga qalafsan ee Dahabka Chow wuxuu u badan yahay inuu saacad badan ku qarash gareeyo dhinacaaga!
La kulan Miller, isku darka 'Corgi & Golden Retriever mix' Isha sawirka
Ku cusub waalidnimada eeyga? The Dahabka Corgi waxaa laga yaabaa inuu adiga kugu habboon yahay. Kuwani waa aad u tababaran oo la dhaqmi karo.
Sidoo kale uma kori doonaan heerar aad u sarreeya, oo laga yaabo inay soo jiitaan dadka deggan guryaha.
Wixii Golden Corgi ka maqan yahay cabir ahaan waxay ku sameeyaan dhogorta. Iyada oo leh jaakad buuxda, dhexdhexaad ah ama dheer, adiga iyo cunuggaagu kuma cusubi doontaan burushka qurxinta.
La kulan iskudhafka Dachshund & Golden Retriever - Isha sawirka
The Dox Dahab ah waa firfircooni iyo ciyaal-saaxiibtinimo. Laakiin fiiri – tarankaani geesinimada leh wuxuu yeelan karaa xarig adag!
Xitaa haddii Dahabkaaga Dahabka ahi uu yahay mid xoog leh, iyadu waa eey wehel wadnaha ah. Ka shaqee guriga? Waxaad tahay Ey Weiner Ey Dahab ah oo riyadiisu rumowday. Ardaygan gabi ahaanba wuu jecel yahay feejignaanta iyo waxay yeelan kartaa walaac kala tag la'aanteed.
La kulan iskudhafka Dalmatian & Golden Retriever
Dahab dahab ah waxay u ekaan karaan wax badan sida qaabka fluffier ee waalidkood dhibcaha leh, ama waxay yeelan karaan jaakad madow-iyo-cadaan jilicsan oo qaabab ah iyagu. Si kastaba ha noqotee, madax-wareejintan waxaa ka buuxa tamar xumbo iyo ruux deggan!
Dhererka iyo miisaanka dadka waaweyn ee 'Goldmation' way kala duwanaan doonaan, laakiin waa ammaan in la sheego in noocani noqon doono dhexdhexaad ilaa weyn.
Nasiib wanaagse, Goldmations waxay u muuqdaan inay ka caafimaad badan yihiin kuwa saafiga ah Dalmatians oo noolaada 13-14 sano. Waxay u nugul yihiin suuxdin iyo sinta dysplasia, si kastaba ha noqotee.
La kulan Mocha, isku darka Doberman & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Suuqa dhexdiisa eey waardiye ah laakiin daruuri maahan inaad rabto Kujo shaqsiyeed? The Dahabka Doberman waxaa laga yaabaa inay saxankaaga taagantahay.
Meshing ah Doberman’s waddooyinka dabiiciga ah smarts leh shakhsiyadda ka baxeysa Dahabka, isweydaarsigan ayaa noqon kara wehel iyo ilaaliye labadaba. Dahabka Doberman runti wuxuu bixiyaa kan ugu fiican labada adduun!
La kulan Oliver, isku darka Dane Weyn & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Ma ogtahay iskudhafkaas Dahabka ah ee labanlaaban kara faras yar? The Dane Dahab Weyn ayaa ka mid ah. Dadka waaweyn Daanyeer Weyn -Kutallaabyada Retriever ee Dahabka ayaa miisaankoodu la eg yahay 200 rodol (91 kg) oo istaag 33 inji (84 cm) dheer!
Si kasta oo ay ahaadaanba, Deenishka Dahabka Weyn ayaa ah dulqaad iyo dabacsan oo ay ku jiraan xitaa kuwa ugu yar ee xubnaha ka tirsan.
Hagaag, aan cadeeyno. Deenishka Dahabka Weyn iskuday inuu noqdo mid jilicsan. Iyadoo la tixgelinayo inay ka weyn yihiin carruurta qaar, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa inaad kormeerto waqtiga ciyaarta si aad u hubiso in kiddos aysan waxyeello u geysan si kama 'ah.
Waa inaan sidoo kale xusnaa in Daanishyada Dahabka Weyn nasiib daro ay ka cimri gaaban yihiin isku dhafka kale ee Dahabka ah. Waxaad filan kartaa foorarkan inuu noolaado 8-10 sano. Laakiin na aamin, sannadahaas waxaa ka buuxsami doona xusuusyo aad Dane Dahab ah oo Weyn!
La kulan Pyrenees-ka weyn & Dareeraha Dahabka Dahabka ah - Isha sawirka
Ma jeceshahay eey leh jaakad jilicsan? The Pyrenees Dahab ah faanaa decadent, dheer dahab ama casaan dhogorta on jir xoog badan.
Laakiin yaanay u oggolaan in cabbirkoodu ku khiyaaneeyo! Pyrenees-ka Dahabka ah ayaa u macaan sida ay u yimaadaanba, kana dhigaya an xulasho aad u fiican qoysaska.
La kulan Mila, isku dhafka Saint Bernard & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Saint Bernard Retriever, Dahabka Bernard, Dahabiga Dahabka ah - macno ma leh waxaad ugu yeerto iyaga, waxaa jira waxyaabo badan oo laga jeclaado xayawaankan weyn.
Awliyo Dahab ah waxay si fudud uga badnaan kartaa 100 rodol (45 kg), iyadoo qaarkoodna miisaan leeyihiin ilaa 220 rodol (100 kg) . Taagan 36 inji (91 cm) dheer, Saint Bernard Retrievers waa, erey ahaan, waa wax weyn.
In kasta oo ay cabbirkoodu yihiin, Saints-ka Dahabka ah ayaa si deggan u deggan oo si fudud loo tababaran karo Eygan ayaa ah ikhtiyaar aad u fiican milkiilayaasha laylis kuwaas oo doorbidaya taranka waaweyn!
In kasta oo Dahabka Bernard uu yahay mid dabacsan oo ku filan in lagu sameeyo guri yar, waxay aad ugu farxi doonaan boos ballaaran. Haddii aadan haysan deyr aamin ah, qaado Dareenkaaga Dahabiga ah ee maalin kasta eeyaha eyda ah si aad ugu qanciso baahidooda jimicsiga.
La kulan isku-darka Samoyed & Golden Retriever
Sammy Dahab ah hubaal ma yara, laakiin iyagu ma weyna, sidoo kale. Dadka waaweyn guud ahaan miisaan 50-75 rodol (23-34 kg) iyo cabir 21-24 inji (53-61 cm) garabka.
Sammy-kaaga Dahabka ah wuxuu aad ugu qanacsanaanayaa nidaam jimicsi oo isku dhafan dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo jirka. Qaado nasasho inta lagu guda jiro socodkaaga, oo ha ku tababaraan xoogaa xeelado ah si aad runtii u dajiso!
Xaqiiqdii, jilicsanaanta, weligeedba isu-ekaanta Dahabka Sammy la qabsan kara noocyo badan oo xaalado nololeed ah iyo qaab nololeedka. Isku-darkaani wuxuu ku farxi doonaa inuu kugula biiro orad maadaama ay cagahaaga ku laaban doonaan.
Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay, si kastaba ha noqotee, in dharkooda buuxa ay iyaga sameeyaan ku habboon cimilada qabow. Haddii aad ku nooshahay aag diirimaad leh, qaado tallaabooyin si aad uga hortagto kuleylka ku jira Fido-kan qalafsan.
La kulan Pizookie, isku darka 'Pitbull & Golden Retriever mix' Isha sawirka
Ku qarxaya tamar, the Dahabka had iyo jeer waa wax. Hubaal, ka Isku dhafka Dahabka Pitbull kugu soo laaban doonaa agtaada Marathon-ka Netflix – orod saacad ka dib soconaya iyo dhowr dagaal oo loolan adag, oo ah.
La kulan Boone, Cavalier King Charles Spaniel & isku-darka Golden Retriever - Isha sawirka
Hadaad weydiiso Gawaarida Dahabiga ah ujeedka noloshooda waa maxay, waxay kuu sheegi doonaan inay jeceshahay dadkooda 24/7. Si daacadnimo ah, Cavalier-kaaga Dahabka ah ayaa laga yaabaa inuu kugula xiriiro adiga hadday awoodaan.
Sidoo kale loo yaqaan Soo Celinta Dahabiga ah ee Petite , Dahableyda Dahabka ah meel kasta oo ay ka joogaan 12-24 inji (30-61 cm) dherer iyo miisaan 13-75 rodol (6-34 kg). Tani waa noocyo aad u ballaaran, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad la kulanto waalidiintaada Dahabka Cavalier si aad fikrad uga hesho sida ay u weynaan doonaan ilmahaaga.
Cabirkooda iyo dabeecaddooda dartiis, isweydaarsigan ayaa ku habboon milkiilayaasha eeyaha markii ugu horreysay. Eeyadan ayaa kala ah kuma habboona milkiilayaasha fadhiga badan , si kastaba ha ahaatee. Waxaa ka buuxa tamar, Cavaliers Dahab ah ayaa loo baahan yahay 1-2 saacadood oo jimicsi ah maalin kasta!
La kulan iskudhafka Afghanistan Hound & Golden Retriever - Isha sawirka
Ka soo jeeda jilicsan Afqaanistaan ​​Hound iyo adag Retriever Dahab ah, ka Hawlgabka Afgaanistaan waa meesha ugu sarreysa ee dabacsanaanta maqaarka. Dharkooda dhaadheer ee ruxruxaa waxay ku darsadaan muuqaalkooda haybad leh, iyagoo siinaya isweydaarsigan hawo xarrago iyo xoog leh.
Soo-celinta Afgaanistaan ​​guud ahaan miisaankeedu kama badnaan 60 rodol (27 kg) wuuna istaagi karaa ilaa 29 inji (74 cm) dheer In kasta oo noocani uusan weynayn, haddana waxay u baahan yihiin qol ay ku ordaan.
Ma waxaad raadineysaa qaab kale oo aad ku jimicsato isugeyntaan? Hawlgabka Afgaanistaan ​​waa ugaarsi cajiib ah ama wehel socod!
La kulan Roscoe, isku darka Alaskan Malamute & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Badanaa isku-darka naqshadeeyayaasha ee liiska ku jira waa kuwo cusub, laakiin ma ahan kuwa Alaskan Goldenmute. Rumayso ama ha rumaysan, iskutallaabtan waxaa laga yaabaa inay jirtay ilaa 1800-yadii!
Waxay caan ku yihiin baashaalkooda, shakhsiyaadka isbiirsada. Kaliya udiyaar garow inaad tabobarto, tababarto, la tababarto ardaygan xiisaha badan!
Alaskan Goldenmutes, qaadashada kadib markii ay soo baxaan waalidkood, way gaari karaan 25 inji (64 cm) dherer iyo miisaan ilaa 90 rodol (41 kg) markii si buuxda loo koray. Ku daboolan jaakad jilicsan oo jilicsan, Alaskan Goldenmute ayaa dooneysa daadsan sidii waalan. (Tani waxay noqon kartaa wakhti fiican oo kor loogu qaado faaruqintaada. Ha dhihin kumaanaan digin.)
La kulan Buttercup, isku dhafka 'Bullmastiff & Golden Retriever' - Isha sawirka
Kusoo kordhaya 27 inji (69 cm) dherer iyo miisaan in ka badan 100 rodol (45 kg) bislaanshaha, the Dahabka Bullmastiff waa qurux iyo gargantuan labadaba.
Marka la fiiriyo cabsidooda, joogitaankooda amarka, waad layaabi kartaa inaad barato in noocani isku dhafan yahay si quruxsan ula jilicsan qoyskeeda.
Kaliya maahan in isweydaarsigan uu leeyahay qalbi weyn, wuxuu leeyahay af weyn, sidoo kale. Daamanadan culus ee dahabiga ah ee 'Golden Bullmastiff' ayaa asal ahaan ah warshado jilicsan. Maqaarka, qofna?
La kulan Onon, tilmaamaha Ingiriisiga & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
The Gointer Mareykan ah waa xoogaa dhif ah, sidaa darteed waxaan wali ka baranaynaa iskutallaabtan khaaska ah ee Golden Retriever.
Waxa ilaa iyo hadda aan ognahay in Gointer-ka Mareykanku yahay a macaan badan, cunug xasaasi ah loo dhisay si uu u hogaamiyo qaab nololeed firfircoon.
Saacad ku qaad ama ku ciyaar oo la sahaminta iyaga, ka dibna u deg deg dhagta xagashada sariirta oo leh iskudhafkan jacaylka badan.
La kulan isku-darka Akita & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Markaad eegto Dahabka Akita , waxaad arki doontaa astaamo ka duwan labada nooc ee waalidka: the Akita ayaa dhismo adag, midab qoraxda oo ah Hawlgab Dahabi ah.
Waxaad filan kartaa Akitaarkaaga Dahabka ah inuu miisaamo 70-90 rodol (32-41 kg) iyo cabir 24-26 inji (61-66 cm) markay dhammaystaan.
Waxa kale oo aad ka filan kartaa daaha caafimaadka leh ee dhogorta dahabka ah ee 'Akita' ee alaabta gurigaaga yaal. Caday cunuggan dhowr jeer usbuucii si aad u xakameyso daadinta, laakiin ha ku maydhin marar badan. Dahabka Akitas ayaa u nugul xaaladaha maqaarka , iyo qubayska badan waxay u horseedi karaan cuncun.
La kulan iskudhafka Weimaraner & Golden Retriever - Isha sawirka
Dahablayaal waxaa ka buuxa layaab. Dharkaan 'pups' waxay noqon karaan wax ka yimid dahab dahab ah ama lacag madow ama naxaas ah! Dammaanadda kaliya? Ma jiro labo Goldmaraners oo si isku mid ah u eegi doona.
Ragga waxay u muuqdaan inay si aad ah uga dheer yihiin dumarka, taagan 22-27 inji (56-69 cm). Dumarka Dahabka ah, marka la barbardhigo, waxay caadi ahaan cabbiraan 18-20 inji (46-51 cm). Rag iyo dumarba Goldmaraners labadoodaba miisaankoodu waa isku mid, inta badan 55-75 rodol (25-34 kg).
Arrin xiiso leh, jaakad loo yaqaan 'Goldmaraner' ayaa ah biyo u adkaysta. U kaxee dabbaasha harada ama barkadda si ay kaaga caawiso cayrinta xoogaa xoog ah!
Goldmaraners waxay u baahan yihiin ugu yaraan saacad jimicsi maalinle ah, markaa horay u soco oo ka bilow khariidaynta meelaha eygu ku habboon yahay ee deegaankaaga.
Kaliya xusuusnow inaad u oggolaanaysid in noocani ciyaaro ka baxsan xadhigga. Waxay yeelan karaan a xoog ugaadhsade iyo qulqulo madaxbannaan oo xoog leh!
La kulan Lia, isku dhafka 'Lhasa Apso & Golden Retriever' - Isha sawirka
The Dareemida Goldenapso waa astaanta muuqaalka iyo jilicsanaanta. Qashin-qubka shaggy waxay u badan tahay inuusan istaagi doonin wax ka dheer 16 inji (41 cm) ama ka miisaan culus 50 rodol (23 kg)
Ha u qalloocin, in kastoo. Kubadan suufka ah ee qalafsan ee eeyga ayaa dhaxlay janjeeraad ilaalin ah Lhasa Apso . Nagu kalsoonow, Goldenapso Soo Celiyayaashu waa geesinimo ka badan intay fiiriyaan!
Goldenapso Retrievers guud ahaan waa caafimaad qabaan, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ka feejignaato xaaladaha indhaha sida indho-beelka iyo atrophy-ka aragga ee horumarka leh. Bloat iyo sinta dysplasia waa walaacyo kale. Sii ardaygan jimicsi fara badan, iskana ilaali in aad naas nuujiso si aad u ilaaliso caafimaadkooda.
La kulan Saber, isku darka Airedale Terrier & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Kalsoonida iyo shaqada, Dahabka saaxiibo la sameyso meelkasta oo ay aadaan. Hadday hirar ku qabsanayaan xeeb dad badan ama ay ku dhex ordayaan jardiinooyin mashquul badan, Goldendale-gaagu wuxuu dareemi doonaa gebi ahaanba raaxo, illaa iyo inta ay dhinacaaga joogaan.
Goldendales badanaa way gaaraan 21-23 inji (53-58 cm) iyo miisaan 50-75 rodol (23-34 kg) oo qaangaar ah. Dufcadooda cufan waxay noqon karaan kuwo aan macaan lahayn oo qoyan ama hirar silloon leh.
Waad filan kartaa in Goldendale-kaaga noqdo madow, caddaan, casaan, ama dahab , inkasta oo hooska saxda ah aan la saadaalin karin.
La kulan Iker, isku darka 'Shar Pei & Golden Retriever' - Isha sawirka
The Pei Dahab ah waa nooc kale oo umuuqda muuqaal kadis ah. Waxay ahaan karaan kuwo duudduuban timo gaagaaban sida kuwa Shar pei , ama maqaar siman leh qufulo dhaadheer sida Golden Retriever.
Nooc dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, Dahabkaaga Pei ayaa guud ahaan cabbiraya 17-24 inji (43-61 cm) dherer iyo miisaan 40-75 rodol (18-34 kg).
Peis Golden ayaa sida ugu fiican ku sameeya 75 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta , oo lagu qaso fadhiyada tababarka ee joogtada ah. Noocan is-hubiyey wuxuu u baahan yahay milkiile khibrad leh oo garanaya sida loola macaamilo madax adaygooda!
Maskaxda ku hay in nolosha Golden Pei ay ku kala duwanaan karto 8-15 sano . Waxay halis ugu jiraan suuxdin, hypothyroidism, iyo Cudurka von Willebrand , iyo sidoo kale OCD iyo buunbuunin . Booqashooyinka dhakhtarka joogtada ah waa lagama maarmaan in laga sii ahaado xaaladaha caafimaad ee saamayn kara ardaygan.
La kulan Scotch, Shetland Sheepdog & Golden Retriever mix Isha sawirka
Shetland Sheepdogs waxay dhasheen xoolo dhaqato, oo caan ku ah inay ka shaqeeyaan baadiyaha Scottish-ka. Markaad ku dhejisid jilitaankan shaqeynaya kor u qaadista Dahabka Dahabka ah, waxaad heleysaa mid dhalaalaya, qiiro leh Sheltie Dahab ah !
Inta badan Goobaha Dahabiga ah ayaa miisaama 40-60 rodol (18-27 kg) oo istaag 16-22 inji (41-56 cm) dheer. Ka imanaya laba nooc oo timo dhaadheer leh, Goobaha Dahabka ah waxay leeyihiin jaakado qurux badan oo midabbo leh: dahab, tan, casaan, madow, caddaan, iyo xitaa buluug merle !
Goobaha Dahabiga ah ayaa lagu sameyn karaa saacad iyo badh jimicsi maalinle ah , laakiin hubi inay iyagu helaan waqti ay ku nastaan, sidoo kale. Noocan isweydaarsigu wuxuu halis ugu jiraa dhowr arrimood oo wadajir ah, oo ay ku jiraan raaxada patellar, hip dysplasia, iyo Cudurka Lug-Calve-Perthes .
La kulan iskudhafka Newfoundland & Golden Retriever - Isha Sawirka
The Newfie Dahab ah waa jacayl caan ah oo riyadiisu rumowday. Way gaari karaan 24-29 inji (61-74 cm) dherer ah oo culeyskiisu yahay cufis 75-150 rodol (34-68 kg)!
Isku darka ruuxa dagan ee Golden Retriever ruuxiisa oo leh Newfoundland’s dareenka ixtiraam la'aanta ah, Newfies Dahab ah ayaa la jaanqaadi karo qoys kasta.
Kala-soociddan ballanqaadka ahi waxay u baahan tahay jacaylkooda oo la soo celiyo maalintii oo dhan, taas oo ka dhigaysa iyaga xulasho wanaagsan oo loogu talagalay shaqaalaha fog iyo waalidiinta guriga-jooga ah.
Terriers Iskotishka waa arday yar yar oo nasiib badan. Dareenkooda oo ay weheliso xasilloonida Dahablaha Dahabka ah ayaa ina siinaya farxad buuxda oo ah Terold Scoreen.
Isugeyn yar oo dhexdhexaad ah, Scolden Terriers waa inaysan ka kor ka dheerayn 24 inji (61 cm) ama ka miisaan culus 40 rodol (18 kg) Ku kalsoonow in qashin-qubkaani uu ku sii jiri doono qiyaas la maareyn karo illaa iyo qaan-gaarnimada.
Kalluumeysatada loo yaqaan 'Scolden Terriers' ayaa hubaal ah inay kugu maaweelin doonaan iyaga shakhsiyaadka xiisaha leh . Iyagu ma ciyi doonaan sida ugu badan ee loo yaqaan 'Scottb Territish Terrier', laakiin weli waxay heli doonaan hab ay ku amraan dareenka aadanaha!
La kulan Layla, Xilliga Guga ee Isbaanishka & Dahabka Dahabka ah - Isha sawirka
Soo Celinta Spangold ku noolow oo wax walba ku neefso banaanka. Tani 60-rodol (27 kg) kubbadda xiisaha leh ayaa ku farxi doonta inay kugu soo dhacdo waddooyinka socodka ama aad ku calaamadeysato fasaxa usbuuca dhammaadkiisa.
Kaliya iska hubi inaad ku hayso xarigga. Spangold Retrievers waxay jecel yihiin inay meeraystaan!
Xaqiiqdii, Soo-celinta Spangold waa inay sifiican ugu noolaadaan guryaha leh daaraha aaminka ah. Waxay u baahan yihiin hareeraha 45-60 daqiiqo oo jimicsi maalinle ah , iyo nabadgelyadooda (iyo tan dabagalka xaafadda), xayndaabku waa baahi.
La kulan Kahlua, iskudhafka Ingiriisiga Mastiff & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Miyey 100+ rodol (45 kg) oo tamar aan joogsi lahayn ayaa u eg sida ardaygaaga ugu fiican? Hagaag, meel dheer ha ka eegin Ingiriis Dahab !
Eydan cabbirka weyn leh ayaa xamaasad badan, in yar marka la sheego. Waxay la ciyaari doonaan carruurtaada maalinta oo dhan oo wali waxay u diyaargaroobayaan fiidkii fiidkii hareeraha guriga!
Dabcan ilaalin dheeraad ah sababtuna tahay iyaga Mastiff hiddo-wadaha, Ingiriis Dahab u baahan milkiile heelan yaa tababari kara isla markaana ka dhexbixi kara eyda.
Aamin na aamin, waxay ku jirtaa danta qof walba in mammoodkan eey uu leeyahay akhlaaq wanaagsan!
Bulldogs Ingiriisi Dahab ah waa beddelka caafimaadka leh ee loo yaqaan 'purebred' Ingiriis Bulldogs , laakiin waxaad wali dooneysaa inaad si taxaddar leh u doorato kuwa soosaara.
Dhibaatooyinka caafimaadka marka laga tago, kuwa Af-Ingiriisiga u cagajugleeya, erey ahaan, waa qaali. Iyaga oo xanaaqa goofy, meerisyadan wax ka gaaban ma aha jacayl.
Waxay kala yihiin u nugul culeyska , si kastaba ha ahaatee. Si kasta oo ay u qurux badan yihiin eygooda cunugga ah, iska ilaali inaad ku dhacdo dabinka daweyn badan iyo jimicsi yar. Qashin-qubkan aan la dabooli karin wuxuu ku tiirsan yahay edbintaada si aad caafimaad u hesho!
Haddii aad rabto Bulldog muuqaal yar oo jimicsi ah, tixgeli Bully American Dahab . Iyadoo Bulldog Mareykan ah hiddo-wadaha, kaniinkan ayaa u kori kara 75 rodol (34 kg) oo muruq saafi ah. Eygan Dahabka ah ee Bulldog-ka Mareykanka ah wuxuu horeyba ugu faanaa murqo muruq ah!
Bulldogs Golden American waxay jecel yihiin inay fidiyaan lugahooda oo ay helaan wax yar oo isku xigxiga, laakiin qasab maaha inay la joogaan xayawaanka kale. Bulsho goor hore waa mudnaanta koowaad for this bakoorad awood leh!
Sidoo kale waa lagama maarmaan inaad u hesho shahaadooyin caafimaad waalidiintaada Golden Bulldog. Waxaad rabtaa inaad hubiso in ardaygaagu ka yimaado shey wanaagsan si loo siiyo tayada nolosha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
La kulan Burton, Rhodesian Ridgeback & Golden Retriever mix - Isha sawirka
Miridhku-camiray Dahab dahab ah waa mid adag oo si fiican loo dhisay, badiyaa miisaankiisu waa 80 rodol (36 kg) markii si buuxda loo koray.
Waxay u muuqdaan inay leeyihiin timo ka gaaban kuwa kale ee isku dhafan ee Dahabka ah, iyaga oo ka dhigaya xulasho wanaagsan milkiilayaasha eyda oo aan dooneynin inay waqti badan ku qaataan qurxinta.
Rhodesian Ridgebacks libaaxyo dagaalamay hal mar, iyo raadadkooda dareen difaac hubi inaad ku soo bixi doontid Riwaayadaada Dahabiga ah. Haddii aad horey u leedihiin oo aad tababbarteen taranka ilaalinta, Golden Ridgeback ayaa kugu habboon adiga!
La kulan Scully, iskudhafka eyda 'Cataopula Leopard Dog & Golden Retriever' Isha sawirka
Waad qeexi kartaa Katalool Dahab ah sida breathtaking. Waa inaan ogolaano. Kuwa ay indho buluug ama bunni ah yihiin dhammaystirka saxda ah ee iftiintooda, maryaha khafiifka ah mararka qaarkood.
Sahamiyayaal iyo shaqaale qalbiga ka shaqeeya, Kaataroolo Dahabi ah aad dareento inta badan guriga qoysaska firfircoon oo leh deyrar waaweyn oo furan.
Qiyaasta saxda ah ee jimicsiga iyo tababbarka, Katahabka Dahabiga ah waa kalgacal, ubad adeec leh. Milkiileyaasha eyda markii ugu horreysay iyo waalidiinta xayawaanka ah ee khibrada leh si isku mid ah ayey u jeclaan doonaan isweydaarsigan!
La kulan Shih Tzu & Golden Retriever
The Dahab Shih Tzu sidoo kale loo yaqaan Shrereiver . (Isku day inaad dhahdo shan jeer soon!)
Ciyaalkan waxaa damaanad qaadaya inay leeyihiin qurux, jaakado dhaadheer iyo dabeecad saaxiibtinimo. Wixii aan dammaanad qaadin waa cabirkooda saxda ah. Shih Tzus waa wax yar, iyo Soo Celinta Dahabiga ah maahan.
Shih Tzu Dahabkaagu waa inuu ahaadaa meel dhexda ku yaal.
Macaan sida ay yihiin, Dahab Shih Tzus waa dhif iyo naadir. Haddii aad nasiib u yeelatid inaad mid hesho, Dahab Shih Tzu ah ayaa sameeya a wehel weyn reer !
La kulan Jackson Storm, bulugga Heeler & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Heelers Dahab ah waa natiijada laba nooc oo maskax maskaxeed leh oo aan haba yaraatee waxba iskaga mid ahayn. Sidan oo kale, waxaad filan kartaa lama filaan ah iskudhafkan.
Badankood waxay noqon doonaan dhisme dhexdhexaad ah, oo aan ka badnaan doonin 75 rodol (34 kg) Laakiin midabka jaakadkooda iyo dhererkooda? Ma jiro wax sheegaya.
Run Eyga Ustaraaliya moodada, Heelers Dahabka ah waa kuwo dhaqso badan, xiise leh oo bartayaal leh dareen xoolo dhaqato . Jimicsi ballaadhan iyo kal-fadhiyo kooban oo tababbaran oo xiiso leh ayaa marin kara awoodaha dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Blue Retriever' waxayna yareeyaan dabeecadaha aan loo baahnayn, sida qashin-qubka ama calalinta
La kulan Jager, iskudhafka Pug & Dahabka Dahabka - Isha sawirka
Mid yar oo dhexdhexaad ah Dahabka Dahabka ah waa isku dhafka wanaagsan ee naxariista iyo feejignaanta. In kasta oo iskudhafkan dahabiga ah ee Dahabka ah uu aad u qurux badan yahay in la cabsi galiyo, dhib kuma lahan doonaan inay kaaga digaan khatarta ka iman karta.
Oo mar haddii halistaasi dhaafto? Isu diyaari wakhtiga ciyaarta! Khaanadaha Dahabka ah ayaa ah sida madadaalo-jecel sida ay u taxaddaraan , samaynta midkan oo ah mid si fiican loo soo koobay.
Oh, iyo ku saabsan laalaabyadaas: hubi inaad adiga nadiifi oo qalaji . Haddii qoyaanku ku soo kordho maqaarkaaga isku laab jeex jeexan, cuncun ama infekshan ayaa ku dhici kara.
La kulan Valco, Poodle, Cocker Spaniel, & isku dhafka dahabka - Isha sawirka
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay noocan isweydaarsiga ee loo yaqaan a Raaxo Raaxo ama Hawl yaraha . Sida laga yaabo inaad ka qiyaastay naanaysyadeeda, the Mini Golden Retriever waa wehelka asalka ah ee canine.
Tani saddex-nooc isku dhafan wuxuu leeyahay muuqaal gebi ahaanba aan la saadaalin karin, laakiin waad ku kalsoonaan kartaa in kuwan ay yihiin dadka u janjeedha ujeedadiisuna tahay inaad ka farxiso.
La kulan iskudhafka 'Greyhound & Golden Retriever' - Isha sawirka
Lugaha dhaadheer iyo dhismo isboorti ayaa sameeya Greyhound dahab ah ku habboon dhammaan noocyada waxqabadyada bannaanka.
Iyo inta udhaxeysa Greyhound’s xawaaraha hillaaca iyo dabeecadda dahabiga ah ee Dahabka, mishiinka Dahabka Greyhound waligiis uma muuqdo mid uumi baxaya. Orodyahannada, waxaa laga yaabaa inaad kula kulantay ciyaartaada noocyadan isku dhafan!
Dahabka Greyhounds guud ahaan waa kuwo caafimaad qaba waana inay noolaadaan 10-12 sano leh daryeel habboon. Weli, way u nugul yihiin buro iyo noocyada kansarka qaarkood . Ku dhiirrigeli buskudkan fooladeysan inuu naso cunnada ka dib, oo ku hay dusha sare ee booqashooyinka dhakhtarka xoolaha si aad ugu ilaaliso caafimaadka sida ugu macquulsan.
La kulan Cody, Shiba Inu & Dahabka isku dhafka ah - Isha sawirka
Shibas Dahab ah waa ciyaal isboorti leh, saaxiibtinnimo leh shaqsiyaad waaweyn. Mararka qaarkood shakhsiyaadkaasi uma ogola inay helaan qol badan xayawaanka kale, si kastaba ha noqotee. Waxay kuxirantahay dabeecadaada saxda ah ee 'Golden Shiba', waxay noqon karaan kuwa sida ugu raaxo leh u noqon kara saaxiibkaaga kaliya iyo midka kaliya.
Tani waa run gaar ahaan haddii aad xoolo yaryar guriga ku haysato. Shibaagta Dahabka ah ayaa leh si fiican u horumarsan ugaarsiga , taas oo dhib u horseedi karta hamster qoyska!
La kulan Pokki, isku dhafka Maltese & Golden Retriever - Isha sawirka
Isku darka kuwa yaryar Malta leh 'Retriever' weyn, oo ah Maltese Dahab ah wuu ka yara yar yahay iskudhafka kale ee Dahabka ah.
Qiyaasta qaangaarka ah ee ardaydu way adkaan kartaa in la go'aamiyo, hase yeeshe, markaa tixgeli oo keliya tarankaan haddii aadan dhib u qabin inaad la yaabto!
Bixitaan iyo cabsi la'aan, Maltese Dahabka waa a afar-lugood go-getter . Si dhab ah looga dhigo sida ugu badan ee ardaygan dabeecaddiisa firfircoon, rusheeyo socod iyo kulanno ciyaaro maalintii oo dhan. Maltese-Da Dahabku waxay jecel yihiin inay waxyaalaha xiisaha hayaan, ka dib oo dhan!
Aussies Dahab ah ku soo qaado kaleidoskope midabbo leh, ka madow ilaa bunni, cadaan ilaa dahab . Ciyaaraha badankood waxay xirtaan jaakad qaabaysan, laakiin isku dhafka midabkoodu way kala duwan yihiin.
La kulan isku darka 'Shepherd & Golden Retriever'
Soo-celinta Australiya ayaa lagu yaqaan shuruudaha jimicsiga ee ka sarreeya . Waa inaan ogaanno in layligan ay tahay inuu ku jiro kicinta maskaxda, sidoo kale.
Noocani waa mid ku jihaysan himilo iyo hawlkar. Iyadoo aan laga helin dhammaan waxyaabahaas xamaasadda leh, Adhijirrada Dahabiga ah ee Australiya waxay noqon karaan kuwo wax dumiya ama niyad jaba.
La kulan Adhijirka 'Anatolian Shepherd & Golden Retriever' - Isha sawirka
Si ka duwan Golden Retriever, Adhijirka reer Anatolia waxay sumcad ku leeyihiin inay yihiin ilaaliyeyaal kulul. Kaaga Dahab dahab ah waxay noqon kartaa meel kasta oo laga feejignaado oo laga fogaado oo laga baxo oo la wadaago oo la wadaago.
In kasta oo dabeecadoodu ay xoogaa hawada ku jirto, Anatolia-yaasha Dahabka ah waxaa loo damaanad qaaday inay labaduba jilicsan yihiin oo bakhaar yihiin.
Anatoliyaanka culeyskoodu waa inuu le'ekaa 150 rodol (68 kg) Haddii aad raadineysid eeyaha dhabta ah, Dahabka Dahabka ah adiga maahan adiga!
La kulan Rumo, isku darka Schnauzer & Golden Retriever - Isha sawirka
Mid ka mid ah iskudhafka Dahabka dhifka ah, Schnauzer Dahab ah sida caadiga ah isboortiga calaamadaha garka Schnauzer. Waxay sidoo kale ku yimaadaan laba nooc oo cabbir ah.
Ka raadso Schnauzer Dahab ah a Heerka Schnauzer waalid haddii aad rabto eey ka weyn. Haddii cunug yar uu xawaarahaaga ka badan yahay, waxaad u baahan doontaa inaad la hesho Golden Schnauzer Gunaanad Schnauzer xididdada
Iyadoo aan loo eegin cabbirkaaga Golden Schnauzer, waxay u badan tahay inay noqdaan caqli badan oo xasilan . Iyagu ma daadiyaan sida ugu badan ee iskudhafka kale ee Golden Retriever, sidoo kale. Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo badan oo lagu jeclaado Dahabka Schnauzer!
Waa kuwee iskudhafka Dhaxdhaca Dahabka ah ee aad guriga keeni doonto?
Iskudar kasta oo ka-hortagga Dahabka waa gebi ahaanba mid gaar ah , hadana gebi ahaanba la jecel yahay .
Iyada oo leh dhammaan waxyaabahan isweydaarsiga ah waa inay bixiyaan, kaliya milkiilaha eyga oo dhan wuxuu ka heli karaa wehelkooda xiga ee isku-dhafka Dahabka ah.
Markaa hadda oo aad fursad u heshay inaad waxbadan ka barato cannaashan dabeecad-wanaagga ah, ee isku-dhafka Dahabka ah ee isha ayaa is leh? Noo soo sheeg faallooyinka!
70 Pug Names: Pug-Squisite, Pug-Tastic iyo Pug-Tiful magacyada Pug
Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Isku-dhafka Macaan iyo Spunky Chihuahua Yorkie
Jarmal Shepherd shaybaadhka rottweiler mix
labrador retriever iyo feerka isku darka
chihuahua yorkie isku darka buuxa oo koray
shaybaadhka dib u soo celinta vs dahab sooceliya
dibi god lagu daray shaybaadhka